Dubai အလုပ်ရှာဖွေရေးအကြံပေးအလုပ်ရှာဖွေခြင်းနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်စျေးကွက်ရှာဖွေရန်နည်းလမ်းများ - အလုပ်များ - အလုပ်ရှာဖွေရေး - ခရီးသွားခြင်း
နိုဝင်ဘာလ 12, 2017
ဒူဘိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြံဉာဏ်ကိုအလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်စျေးကွက်များအတွက်နည်းလမ်းတွေသင်ကိုယ်တိုင်။ ဒီဒူဘိုင်းစီးတီးတှငျစစျမှနျသောဖြစ်နိုင်သည်ဒါပေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပေါ်တွင်သင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေမယ့် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အတွက်လမ်းညွှန်ရှိ။ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်သစ်ကိုရှာဖွေသင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသေးစိတ်ကိုစျေးကွက်မှကြီးမြတ်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ အဘို့ ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေရေး၏ရည်ရွယ်ချက်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, ယူအေအီး၌သင်တို့၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်စျေးကွက်ဖို့အများကြီးကြီးမြတ်နည်းလမ်းတွေနေဆဲရှိပါတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၌ဤရည်ရွယ်ချက်ကို, ထိုအတူ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစျေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်ရာအရပျဖွစျစနေို။ နှင့်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ, သင့်အိပ်မက်အနေအထားတစ်စုံတစ်ဦးတို့ကအချိန်မရွေးယူနိုင်ပါသည်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးအမှုဆောင်အရာရှိစုဆောင်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအဖြစ်အသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုရှာဖွေနေ။ သင်ဆဲဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည် ယူအေအီးအတွက်အသစ်တခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာတွေ့.
သူတို့အခွအေနမြေိုး, သငျသညျစတင်အလုပ်လုပ်သင့်တယ် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်ပေါ်မှာ။ အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုမှာ သင်ကတိုးချဲ့နေသည်အသစ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိသင့် ဒူဘိုင်းမြို့နှင့်အဘူဒါဘီအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များ၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်။ သင်မည်သူကိုသိရန်ရယူခြင်းပစ်မှတ်ဖြစ်သင့်သည်။ သငျသညျ hit ချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင် ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာအတွက်အလုပ်အကိုင်အကိုရှာဖွေရန်။ သငျသညျအတော်လေးအမြော်အမြင်ရှိရှိ၏ CV ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ် - ဘယ်လိုအလုပ်တကယ်ကောင်းသောစျေးကွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှ
တစ်ဦးပုံဥပမာအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားကြောင့်ထားရန် လက်ျာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရည်အချင်းကိုရှိခြင်း။ အလုပ်မှဆန့်ကျင်တွင်, အတွေ့အကြုံအမြဲမဟုတ်ပါဘူး သငျသညျသစ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုံခြုံရေးအတွက်လုံလောက်သော။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သင်ကိုယ်တိုင်စျေးကွက်မည်သို့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်နှင့်လုံလောက်စွာ, ဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက်, သငျသညျအလုပျတဘို့ကိုဘယ်လိုမှတကယ်ကောင်းသောစျေးကွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သစ်တစ်ခုအလုပ်လျှောက်ထား, နေပါတယ်စကားပြော သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု။ ဤအချက်များအားကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောင်းအကြောင်းပါ။
ကရောင်းအားခဲရတဲ့တူသောရဲ့အလားအလာအလုပ်ရှင်နှင့်အတူအစီရင်ခံစာထူထောင်ထောက်ပြရန်။ သင့်ကိုမြော်လ ပစ်မှတ်အကျိုးဆက်စော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်းဥပမာအားကြီးသောအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်သင်သည်တည်နေရာအား။ သူတို့အခွအေနမြေိုးကိုသင်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှင်များတောင်းဆိုချက်များကို hit သငျ့သညျမြားနှငျ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောင်းဖို့ဘယ်လိုသိ။ ကွဲပြားခြားနားကြောင့်ဝတ်ဖို့, ရေရှည်အတွက်အလုပ်အကိုင်အကရှာဖွေနေအတိအကျတူညီင် ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်တိုင်းအလုပ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်.
Marketing ကိုဥပမာအတော်များများအံ့သြဖွယ်အဓိပ္ပါယ်များရှိပါတယ်, သင်သည်တတ်နိုင် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မယ့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုသုံးပါ။ သငျသညျ LinkedIn သို့မဟုတ် Facebook အလုပ်အကိုင်များအုပ်စုများအပေါ်ဥပမာအဘို့သင့်အသေးစိတျ post နိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်ပင်တိုက်ရိုက်အလုပ်ရှင်များရောက်ရှိဖို့အလုပ်ရှင်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှ post ။
ဘယ်လိုလဲ သို့ အလားအလာများအတွက်ထွက်မတ်တပ်ရပ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှင်များ
သို့သော်ငြားလည်း, သင်သည်သင်၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေမယ်ဆိုရင်။ သင် ... သင့်တယ် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစဉ်းစားပါ။ သငျသညျသကျသပွေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အရှိဆုံးဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားသည်သင်၏ပညာရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချက်များအရအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုပေါင်းစပ်နေတဲ့သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, သင့်ကိုသက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုတစ်ဦးခိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအတောအတွင်းဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့နေဆဲတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တန်ဖိုးကိုရှိသည်။
ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူပထမဦးဆုံးဌာန၌တစ်ဦးအလားအလာအလုပ်ရှင်အဘို့မိမိတို့တန်ဖိုးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိုတင်သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဦးဆောင်လမ်းပြရန်စျေးကွက်နှင့်အတူစတင်သင်သည်သင်၏အလားအလာတိုက်ဖျက်မည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့မှာ အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ပင်လယ်ကွေ့တွင်အင်ဒီးယန်းကူညီပေးနေ။ တစ်အချက်ဖြစ်ပါသည်, ငါတို့သည်သင်တို့အိန္ဒိယထဲကနေလျှင်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကိုလက်ခံရရှိရန်ကိုချစ်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလားအလာအလုပ်ရှင်များအဘို့အထွက်မတ်တပ်ရပ်နိုင်။
ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တို့ကိုစူပါခက်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှင့်တင်ရန်, စကားပြော။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကျိန်းသေ, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောညှိနှိုင်း, သံတမန်ရေးအဖြစ်အချို့သောကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်အလုပ်မလုပ်ဖို့လိုအပျသငျသညျဤအချက်များကိုအားပေးတော်မူပြီ, တိုင်ပင်ခြင်းနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ cryptocurrency ရောင်းအား။ တစ်ခုထူးချွန်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူ foreground ခုနှစ်တွင်, သင်သည်သင်၏ပစ်မှတ်ကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကျိန်းသေ, သင်တကယ်မျှော်လင့်ထားသည့်အလုပ်ရှင်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်း။ သငျသညျများမှာအထူးသဖြင့်လျှင် အလုပ်သမားတစ်ဦးအဖြစ်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေ။ တဖန်သင်တို့မျက်နှာမှမကျြနှာကိုအနှစ်ချုပ်နှင့်သင့်ကိုသိနိုင်ကြပါလိမ့်မည် အချိန်ရကျိုးနပ်။
ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသင်သည်ရန်စံပြအတှေ့အကွုံကိုပူဇော်ရကြမည် ဒူဘိုင်းတွင်မြင့်မားသောအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သောစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများနှင့်အလုပ်အကိုင်တွင်ကျယ်စွာ။ သငျသညျစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမှာအလွန်ကောင်းသောရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်စုံလင်သောအထုပ်အရမှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ။ မှတ်ချက်ချခဲ့ပြီးသကဲ့သို့သင်တို့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏မြို့တော်ထိမှန်ကတည်းကသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအမြဲပြောင်းလဲကြီးပြင်းစေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိဒူဘိုင်းအတွက်အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိအခန်းကဏ္ဍရှာဖွေနေတာကိုရပ်လိုက်ပါ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်ပင်လယ်ကွေ့ထဲမှာန်ထမ်းခေါ်ယူမှုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်အအခက်ခဲဆုံး၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။
ထိုသူအပေါင်းတို့သည်နိုင်ငံတကာနောက်ခံမှလာနေသောကြောင့်သူတို့ကအခြားသူများထံမှအတော်လေးကွဲပြားခြားနားပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့နှင့်အတူအရလွယ်ကူသောမဟုတ် သင်သည်အဘယ်သို့သိနှင့်အတူ orientated ခံရဖို့လိုအပ်.
သငျသညျ WhatsApp ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ် အလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေ ပထမဦးဆုံးအနိမ့်အဆင့်အထိပေါ်မှာ။ စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများအဘို့အများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်သင့် LinkedIn ပရိုဖိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့် LinkedIn ပရိုဖိုင်းကိုသိသိသာသာသငျသညျရှိနိုင်ပါသည်အကြီးမားဆုံးတံခါး၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ , ဒီအကြောင်းပြချက် CV ပေးပို့ခြင်းနှင့် အလားအလာအလုပ်ရှင်ရန်သင့်ပရိုဖိုင်းကိုစျေးကွက်s ကိုသငျသညျရှိနိုင်ပါသည်အကောင်းဆုံးကိုအယူအဆဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဝှက်ထားကိုနားလည် အလုပ်ဈေးကွက်သို့မဟုတ်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများမှအတွင်း၌အလုပ်လျှောက်ထားခြင်း ဒူဘိုင်း၌တည်၏။ သင့်ရဲ့အလုပ်လျှောက်လွှာ၏နောက်ဆုံးသုတေသန၌တည်၏။ သငျသညျတတ်နိုင်သမျှအခြေခံလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အများနှင့်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပစ်မှတ်စျေးကွက်အတွင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ထိမှန်နိုင်ပါတယ် ဒူဘိုင်းဟိုတယ်နေရာလွတ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အဖွဲ့အစည်းများ၏သဘောတရားနှင့်ဒဿနကိုဖေါ်ထုတ်။ ပြီးနောက်အားလုံးအတွေ့အကြုံ, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, အရည်အချင်းကို, ကျွမ်းကျင်မှုထွက်ရှာရန်ကြိုးစားလျက်, အရှိဆုံးကုမ္ပဏီတန်ဖိုးကို qualification ။
သင်သည်လက်ျာလူတစ်ဦးစကားပြောပါလိမ့်မယ်မတိုင်မီအထူးသဖြင့်အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုအလုပ်ဖော်ပြချက်ဖတ်ပါ။ ဒါ့အပြင်မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာဟာသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် အလုပ်နှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက် သူတို့ရဲ့အရေးတကြီး, မလှူနှင့်အပေါ်ဝယ်လိုအားများအတွက် substructure ယူအေအီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစျေးကွက်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အသောအခန်းကဏ္ဍအဘို့ပြုခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်သောအရာကိုအညီထုတ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ထိုအခါရေရှည်မှာ, သင်ထားတဲ့အလုပ်အမှုဆောင်မန်နေဂျာအဖြစ်မည်။ ကုမ္ပဏီ၏အကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့အံ့သြဖွယ်စွမ်းဆောင်မှုနှင့်မထိုက်မတန်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်။
အခြိနျမှနျမှသင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာဖွေတာ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဆက်သွယ်မှုထူထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤအတူစိတ်ကိုတကယ်ပံ့ပိုးမှုများလိုအပ်သူကိုအခြားသူများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှတက်ရ။ ဤစကားမှန်ပစ်မှတ်စုဆောင်းမှုကလူနည်းလမ်းများဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့။ အခြားတစ်ဖက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတိတ်ကာလ၌ပြစ်မှားမိသည်သင်၏အထူးသင်တန်းအကြောင်းပါ။ ဥပမာအားဖြင့်သင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လို ဒူဘိုင်းအတွက်အနာဂတ်အလုပ်ရှင်မှတန်ဖိုးရှိသော.
တဖန်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပညာရေး၏တစ်မူထူးခြားသောပေါင်းစပ်။ အဖြစ်မှန်၌သင်တို့ကိုအခြားသူများမှသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုမြှင့်တင်ကိုသုံးနိုင်သည်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့အတိတ်အတွေ့အကြုံနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူ။ Will သင့်ရဲ့ searchin များအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ဆ။ တစ်ချိန်ကယခင်အချိန်အပေါ်သို့တိုင်းအလုပ်ရှာဖွေသူတစ်ဦးအလုပ်သစ်နှင့်အတူဂုဏ်ပြုကြောင်းကိုအောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အနုတ်လက္ခဏာဘက်ပေါ်ကြောင်းကိုသင်၏အနာဂတ်အလုပ်ရှင်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းကိုသိစေရန်သင့်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျများမှာအထူးသဖြင့်လျှင် သငျသညျပါကစ္စတန်ကနေလာလျှင်နေရာလွတ်ကိုရှာဖွေ နှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းအခြေချရန်ရှာဖွေနေ။
ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်ယူအေအီးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစျေးကွက်မှအံ့သြဖွယ်နည်းလမ်းတွေ - ဒါဟာသင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်ကြမည်နည်း
ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်အလုပ်အကိုင်များရှာတှေ့နိုငျရှိရာတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောအလုပ် site ကိုစကားပြော:
linkedin - ရေရှည်မှာအကောင်းဆုံးအတွက်အများစုမှာလူကြိုက်များ အလုပ်ရှာဖွေရေးအတှကျကောငျး.
Angel.co - သစ်ကိုစတင်-ups လွယ်ကူမှုအတွက်အလွန်ကောင်းသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုကိုရှာ။
အကြှနျုပျ၏အခွင့်အလမ်း - သင်ကတိုက်ရိုက်သတင်းစကားပေးပို့နိုင်ပါတယ်ရှိရာအကောင်းဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ယက်ကိုက်ဘ်ဆိုက်များတစ်ခုမှာ။
နောက်ထပ် key ကိုအမှတ် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီ၌သင်တို့၏အလုပ်ရှာဖွေရေး တစ်ပုံစံဘာသာစကားဖြစ်ပါသည်. သူတို့အခွအေနမြေိုး, ကောင်းမွန်သောဤဖွဲ့စည်းမှုဖော်ပြတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု၏ဖြစ်စဉ်ကိုအစီအစဉ်စကားပြောအများအပြားအဖွဲ့အစည်းများများအတွက်အသုံးဝင်သောနိုင်ပါတယ်။ ကြောင်းရောင်းအားကျွမ်းကျင်မှုလယ်အတွင်းဖော်ပြခြင်းမ သငျသညျပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရဖို့ကိုသုံးနိုင်သည်.
မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာသင်အသုံးပြုနေသောသောဝေါဟာရများဖြစ်ပါတယ်။ သင်အင်တာဗျူးတဲ့အခါနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုရဲ့အာရုံကိုအာရုံစိုကျနှငျ့အတူ။ အထက်ပြထားတဲ့အတိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သော့ချက်စာပိုဒ်တိုများကားအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုနားလည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအလုပ်ရှင်အဘို့ထိုသူတို့အညီအမျှအရေးကြီးသောကြောင့် သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အသစ်တခုအခန်းကဏ္ဍများအတွက်လျှောက်ထားသည့်အခါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, မှနျကွောငျးဝနျခံသောဘာသာစကားသင်ယူအေအီးအတွက်အိပ်မက်အလုပ်ဆင်းသက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်ယူအေအီး၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစျေးကွက်မှအံ့သြဖွယ်နည်းလမ်းတွေ အသစ်တစ်ခုကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း start ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်.
ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်စျေးကွက်အဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကဏ္ဍများအတွက်မှန်ကန်သောစာပိုဒ်တိုများသုံးနိုင်သည်။ သင်ပင်သင့်ရဲ့အနာဂတ်အလုပ်ရှင်အားဖြင့်ပေးဆောင်အထူးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအရကူညီနိုင်ပါစေ။ ဤအတူစိတ်တွင်မှန်ကန်သောသဒ္ဒါအမှားတွေ, စာလုံးပေါင်းအမှားတွေသို့မဟုတ်ပင်ပြီးပြည့်စုံသောစာကြောင်းကိုရှာစေခြင်းငှါ သငျသညျအင်တာဗျူးရင်ဆိုင်ရမယ့်မျက်နှာရှိသည့်အခါ. သငျသညျရှိနိုင်ပါသည်အဆိုးဆုံးအမှားအင်တာဗျူးအဘို့အသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့စုဆောင်းရေးသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းမှာအမှားဖော်ပြထားခြင်းပါလိမ့်မယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင့်ရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုအများကြီးဆင်းကို run ပါလိမ့်မယ်။
ဒူဘိုင်းဖြစ်ပါသည် အလုပ်နေထိုင်ပြီးစတင်ရန်တစ်ခုအံ့သြဖွယ်ရာအရပျ ဒါပေမယ့်၏ CV ကိုစုံလင်ခြင်းရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ သင်ကစျေးကွက်လိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ကောင်းနေပါစေ။ ဒါဟာမှားယွင်းဥပမာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား အကယ်. မည်သူမဆိုရောက်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အခါတိုင်းသင်တစ်ဦးကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းစေလွှတ်ကြ၏။ ပေါ်မှာသေချာအလုပ်လုပ်နှင့်မြင့်မားသောလူတန်းစားနှင့်အတူလုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးခြင်း အနည်းငယ်သာ ၏ bit နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်
သင့်ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီအမှတ်တံဆိပ်တည်ဆောက်ခြင်း၏အလင်း၌။ သင့် application မှအနည်းငယ်ကြော့ရှင်းပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိတွေ့ထည့်သွင်းဖို့ကြောက်ခြင်းကိုမပြုကြနှင့်။ ထို့အပွငျပေမယ့်ဒီရေရှည်မှာတှငျစစျမှနျသောဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလျှောက်လွှာ သင်သည်သင်၏အောင်မြင်ခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အားထုတ်မှုစျေးကွက်နိုငျပုံကိုခိုင်ခံ့ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဤအချက်များပေးထားသောကြောင့်သင်ကဥပမာအားအခြားကျွမ်းကျင်သူများထံမှသင်တို့ကွဲပြားခြားနားသောအဘယ်အရာကိုထွက်တွက်ဆကြောင်းအလွန်အရေးကြီးပါသည်, ဒူဘိုင်းအတွက် Philipino အလုပ်သမားတွေအတွက်။ ထိုကြောင့်သင်သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလမ်းအတွက်အလုပ်ရှင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့မရပါဘူး။
ဒီသင်၏စိတ်ဝင်စားမှုမှတပါးရည်ရွယ်ချက်ကို, စိတ်အားထက်သန်မှု, စိတ်လှုပ်ရှားမှု, ဆည်းကပ်မှုနှင့်အတူ တစ်ဦးဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီစီမံကိနျးအတှကျ။ အတူတကွသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု၏ဘာမျှမပြောပြီးပြည့်စုံသောအထုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီတော့ထို့ကြောင့်စိတ်နှင့်အတူပယ်ချကြပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစျေးကွက်သင်တစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝိသေသပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက 2018 အတွက်လုပ်ငန်းခွင်များအတွက်.
နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှာတော့ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက်အောင်မြင်စွာသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုစျေးကွက်ဖို့ဘယ်လိုအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ တစ်ခုခုကိုအမှု၌, ယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူပေါ်သယ်ဆောင်။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းရှင်းမှပင် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းအလုပ်အကိုင်အများအတွက်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမှတ်တံဆိပ်အပေါငျးတို့သစက်မှုလုပ်ငန်းကျော်အလွန်မြင်နိုင်ဖြစ်လာသည်။ နောက်ဆုံးမှာလက်ရှိအချိန်အထိ, သင်ဒူဘိုင်းအတွက်တံဆိပ်အကြောင်းကိုကိုယ်ပိုင်အသိပညာတည်စေမည်။
ဤအချက်များအဆက်မပြတ်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ကောင်းမွန်စွာအသိပေးအနေအထားပေးထား သငျသညျပိုကောင်းအလုပ်သုတေသီစေသည်။ မျက်နှာပြင်စက်မှုလုပ်ငန်းခြစ်ရာဤရည်ရွယ်ချက်ကိုအတူ။ ဒီအကြောင်းပြချက်သုတေသနများအတွက်ဒူဘိုင်း blogs များထဲတွင်တစ်ခုကြေညာချက်, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့နှင့် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အပေါ်တယ်က်ဘ်ဆိုက်များ။ သငျသညျအမီလိုက်စေခြင်းငှါနောက်ထပ် key ကိုအမှတ်ဖြေဆိုခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်ဆွေးနွေးမှုအမှတ်အသားအထောက်အကူပြုသည်။ ဒါကြောင့်အဆင်သင့်ဖြစ်နှင့်အချိန်ဇာတ်စင်အတွက်အင်တာဗျူးအချက်ရန်သင့်အား forward လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်အတွက်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကျိန်းသေအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုကျော်အောင်မြင်စွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစျေးကွက်ဖို့ဘယ်လိုသင်ပြအခြားသောလမ်းထားရန်။
ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်ယူအေအီးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစျေးကွက်မှအံ့သြဖွယ်နည်းလမ်းတွေ - တည်ဆောက်ရန်အမြဲကြိုးစားပါ ဒူဘိုင်း၌သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်.
social networking site များပေါ်တွင်အောင်မြင်စွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစျေးကွက်
အညီအမျှအရေးကြီးပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစျေးကွက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဆိုရှယ်မီဒီယာသည်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, networking site များဦးဆောင်မူလတန်းဂိမ်းလေဲဖြစ်ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သူတို့မှပုံမှန်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီ ယူအေအီးအတွက်စော်ဘွားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်း။ social networking သင်အဆက်အသွယ်များနှင့်ကြိုတင်မဲအောင်ကူညီပေးသည် သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ထိုအခါ မှစ. ဤကဲ့သို့သော Linkedln, Angel.co နှင့် Bayt.com အကူအညီနဲ့အဖြစ်အချိန်က်ဘ်ဆိုက်များမှသင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာတိုက်ရိုက်အလုပ်ရှင်များရောက်ရှိဖို့။
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်တစ်ဦးလက်လှမ်းချဉ်းကပ် intercommunication မှ သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစီမံခန့်ခွဲကူညီပေးပါမည်။ ကွန်ယက်ကိုက်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရတဲ့ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိမှတ်ချက်ပြုထားသည်သကဲ့သို့သင်တို့အသစ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရွေးချယ်စရာ်လင်းစေကိုကူညီပေးပါတယ်။ သငျသညျကြှနျုပျတို့ကုမ်ပဏီမှဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ်ဘို့ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload တင်သကဲ့သို့ရှည်လျားတကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်။ နှိုင်းယှဉ်, သင့်အလုပ်ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေငှားရမ်းခြင်းနှင့်အရည်အချင်းများကိုတိုးမြှင့်။
အအောင်မြင်ဆုံးတစ်ခုမှာ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်များများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတောင်အာဖရိကဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေတွေထဲမှာသူတို့အကောင်းတစ်ဦးပညာရေးရှိခြင်း။ ပြီးသားအရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်တောင်အာဖရိကအခြေစိုက်နေသောကြီးမားသည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ထို့ပြင်အလွန်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံကို။
ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်ယူအေအီးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစျေးကွက်မှအံ့သြဖွယ်နည်းလမ်းတွေ - ကသင်တို့အဘို့အလား?
ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့် WhatsApp ကို Group မှစျေးကွက်ရှာဖွေရေး
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေကြလျှင်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ် ဒူဘိုင်းအတွက်လူကြီးမင်း၏ CV ကိုမြှင့်တင်ဘို့ WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ။ ဤအချက်များပေးထားကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကအခြားသူများကိုဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေစုဆောင်းကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့အများအပြားအုပ်စုများဖန်တီးထားသည်။ သင်တို့သည်ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေအနှစ်သာရ၌သင်တို့၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာဒူဘိုင်းအတွက်ဒါပေမဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသာသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုစျေးကွက်အကြောင်းများမှာအမှု၌ဤစူပါအရေးကြီးပါသည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအခြားသူများကိုကူညီခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်သည်အရှေ့အလယ်ပိုင်း WhatsApp ကိုအဖွဲ့များအပေါ်လူမှုရေးအကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲ။ မဆို WhatsApp ကိုအဖွဲ့များတာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ကြပြီးအမြဲဤနည်းဖြစ်သင့်သည်။ နေ့စဉ်အလုပ်ရှာဖွေသူရှာဖွေစုဆောင်းကိုဆက်သွယ်မယ့်အခွင့်အလမ်းရှိသင့်သောကြောင့် မိုဘိုင်းဖုန်းကိုကျော်။ ရာထူးရှာနေသူအသစ်တခုကိုယ်စားလှယ်လောင်းမဟုတ်နိုင်ပါလျှင်၎င်းသည်အလုံအလောက်မမျှတဘူးဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပေးချက်များနှင့်အကြံဉာဏ်ကိုလက်အောက်တွင်သင်သည်လည်းငှားရမ်းကုမ္ပဏီများသည်ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးရှိတယ် Ther Careerjet အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် နှင့် ပင်လယ်ကွေ့စုဆောင်းမှုက်ဘ်ဆိုက်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သင်၏ CV ကိုယူဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ နှင့်သင့်အလုပ်လျှောက်လွှာနှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်သေချာသည်။
ဘို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေတာ နှင့်နိုင်ငံခြားအလုပ်အကိုင်နေရာလွတ်။ ကြာအချိန်နှင့်စျေးကွက်၏အဓိကအရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျလကျ၌ဆက်သွယ်မှုများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အားလုံးအထက်, အဖြစ်မှန်အတွက်, သငျသညျယူအေအီး၌ကောင်းသောလက်မှတ်များရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဇာတိမြေမှသင်၏အတွေ့အကြုံကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရ ဒူဘိုင်းထဲတွင်နေရာခံရဖို့အလုံအလောက်။ အချို့ကိစ္စသင်ယူအေအီးအတွက်စတင်အလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ပင်လယ်ကွေ့အတွင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်ကရကျိုးနပ်သည် အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရာထူးစစ်ဆေး လမ်းညွှန်။ အဆိုပါအမှုဆောင်အရာရှိအများစုမှာဒေသအလိုက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်သုတေသနပြုနေကြသည်။ သို့သော်ရှိသမျှသောစမတ်လမ်းပြီးနောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနယ်ပယ်များတွင်တကမ္ဘာလုံးအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ MiddleEast တိုင်းအသစ်ကသမ္မတလောင်းများအတွက်ရွေးချယ်စရာပြည့်ဝ၏။ အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်အလုပျသမားမြားအတှကျ။ သငျသညျပြီးသားဒူဘိုင်းလည်ပတ်ခဲ့ကြလျှင်မူကားသင်သတိထားမိသင့်ပါတယ်။
တစ်ဦးရှိပါတယ် ရိုးရှင်းအလုပ်အကိုင်တွေအများကြီးဥပမာ, ကာတာနိုင်ငံသို့မဟုတ်ကူဝိတ်နဲ့တူပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများရှိရာထူး telesales ။ ဒီအမျိုးအစား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းယူအေအီး၌ကောင်းသောဖြစ်ပါသည်.
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစျေးကွက်အကြောင်းကိုအနှစ်သာရတွင်ဤအချက်များကိုပေးတော်မူ၏။ ထောက်ပြဖို့သငျသညျရိုးရှင်းစွာနဲ့စတင်ရန်လိုအပ်ပါတယ် တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အက်ဘ်ဆိုက်များမှကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအပ်လုဒ်တင်ခြင်း။ ထိုအခါကအနုတ်ဘက်မှာနေတုန်းပဲ, ကိုယ့်ကိုယ်စျေးကွက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုအလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ်ဘို့အအေးခေါ်ဆိုမှုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းဖွင့် တစ်ခုအံ့သြဖွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပရိုဖိုင်းရှိခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းအလုပ်ဈေးကွက်ကတင်ပြ.
သို့ဖြစ်. သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းသာလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်အဲဒီအခြေအနေတွေအောက်မှာ, ကျွမ်းကျင်ဖို့အချိန်ယူပါ။ ကျွမ်းကျင်မှု, ထောက်လှမ်းရေးနှင့်သင့်အနာဂတ်အလုပ်ရှင်ချင်ကြဟုငါသိ၏-ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းကစနစ်၏အမျိုးမျိုး ဒူဘိုင်းတစ်ဦးအခန်းအလွတ်ဘို့သင့်ကိုငှားရမ်း။ ပွိုင့်ကိုမကြာခဏသတိမမူသငျသညျကြှနျုပျတို့ကုမ်ပဏီကိုသုံးနိုင်သည်နှင့်အမှုအရာတစ်ဦးပထမဦးဆုံးအရာအရပျ၌ပြစ်မှားမိရအထူးကုအတိုင်ပင်ခံဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါစမတ်နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည် MBA ဘွဲ့ပညာရေးရှိခြင်းနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်ကိုရှာတွေ့။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်ယူအေအီးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစျေးကွက်မှအံ့သြဖွယ်နည်းလမ်းတွေအများကြီးကိုကူညီလိမ့်မည်။